Lioka 4 - Ny Baiboly
Lioka toko 4
Ny nakan'ny demony fanahy an'i Jesoa - Jesoa tsy voahaja tao Nazareta - Demony voaroaka sy marary maro sitrana.
1Ary feno ny Fanahy Masina Jesoa, dia niverina avy tany Jordany ka nentin'ny Fanahy tany an'efitra efa-polo andro, 2sady nalain'ny demony fanahy izy no tsy nihinana na inona na inona nandritra izany andro izany; ka noana nony tapitra izany. 3Dia hoy ny demony taminy: Raha Zanak'ndriamanitra hianao, asaovy tonga mofo io vato io. 4Fa hoy Jesoa taminy: Efa voasoratra hoe: Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra avy amin'Andriamanitra. 5Dia nentin'ny demony niakatra tany amin'ny tendrombohitra avo anankiray izy, ka nanehoany indray mipy maso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao, 6ary hoy izy taminy: Homeko anao avokoa izao fanapahana rehetra izao sy ny voninahiny, satria nomena ahy ka mba omeko izay tiako kosa. 7Koa izao àry: raha mitsaoka ahy hianao, dia ho anao avokoa izy. 8Fa izao no navalin' i Jesoa azy: Efa voasoratra hoe: Ny Tompo Andriamanitrao no hivavahanao, ary izy irery ihany no hotompoinao. 9Dia nentiny tany Jerosalema indray izy, ka napetrany teo an-tampon'ny tempoly, ary nilazany hoe: Raha Zanak'Andriamanitra hianao, mianjerà any ambany any; 10fa efa voasoratra hoe: Nomeny didy hiambina anao ny anjeliny, 11ary hitondra anao eo an-tànany izy ireo fandrao tafintohina amin'ny vato ny tongotrao. 12Fa namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Efa voasoratra hoe: Tsy haka fanahy ny Tompo Andriamanitrao hianao. 13Nony tapitra nanao izao fakam-panahy azy rehetra izao ny demony, dia nandao azy aloha mandra-pihavin'ny fotoana indray.
16Nony tonga tany Nazareta tanàna nahabe azy izy, dia niditra tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony tamin'ny andro sabata, ary nitsangana hanao ny famakian-teny. 17Natolotra azy ny bokin'Izaia mpaminany, ka nony novelariny dia hitany ny teny voasoratra hoe: 18Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo, fa nanosotra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy sy naniraka ahy hankahery ny torotoro fo, 19hilaza fahafahana amin'ny mpifatotra sy fahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahorina ary hitory ny taom-pahasoavan'ny Tompo sy ny andron'ny famaliana. 20Nony nahorony ny boky dia naveriny tamin'ny mpitandrina ka nipetraka izy, ary nifàntaka tany aminy avokoa ny mason'izy rehetra tao amin'ny sinagoga. 21Dia rafitra niteny taminy indray Jesoa nanao hoe: Androany no efa tanteraka eo amin'ny sofinareo izany Soratra izany. 22Ary nankalaza azy izy rehetra, sady talanjona noho ny tenim-pahasoavana naloaky ny vavany, ka hoy izy ireo: Tsy ny zanak'i Josefa va ity?
23Ary hoy kosa Jesoa taminy: Marina raha tsy ataonareo amiko ilay oha-bolana hoe: Dokotera, sitrano aloha ny tenanao. Ny zava-mahagaga renay nataonao tany Kafarnaoma mba ataovy eto amin'ny tany nahabe anao koa. 24Dia notohiziny hoe: Lazaiko marina aminareo fa tsy misy mpaminany hajaina amin'ny tany nahabe azy. 25Ary lazaiko marina aminareo koa fa maro no mpitondratena tamin'Israely tamin'ny andron'i Elia, raha nihantona telo taona sy enim-bolana ny orana ka voan'ny mosary mafy ny tany rehetra, 26nefa tamin'izy ireo tsy nisy nanirahana an'i Elia na dia anankiray aza, fa tamin'ilay vehivavy mpitondratena tany Sareptà any amin'ny tany Sidòna ihany; 27ary be koa no boka tao amin'Israely tamin'ny andron'i Elisea mpaminany, nefa tsy nisy sitrana na iray aza, fa Naamàna Siriana ihany. 28Dia tezitra mafy izay rehetra tao amin'ny sinagoga raha nandre izany, 29ka tafantsangana nandroaka azy hiala ao an-tanàna, sady nitondra azy tany an-tampon'ny tendrombohitra iorenan'ny tanànany mba hazerany any an-tevana; 30fa namaky teo afovoan'izy ireo izy dia lasa.
31Ary nidina tany Kafarnaoma tanànan'i Galilea izy, ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata, 32ary gaga ny olona tamin'ny fampianarany, satria niteny toy ny manam-pahefana izy. 33Tao amin'ny sinagoga dia nisy lehilahy azon'ny demony maloto, ka niantso mafy 34nanao hoe: Aoka re, fa mifandraharaha inona aminao izahay, ry Jesoa avy any Nazareta ô? Tonga handringana anay va hianao? Fantatro raha hianao, dia ilay Masin'Andriamanitra. 35Fa notenenin'i Jesoa mafy izy nataony hoe: Mangina, ary mialà amin'io lehilahy io. Dia nandavo azy tamin'ny tany teo afovoan'ny olona teo ny demony vao nivoaka niala taminy, nefa tsy nandratra azy akory. 36Talanjona izy rehetra, ka nifampilaza hoe: Teny manao ahoana re izany? fa mandidy ny fanahy maloto amin-kery sy fahefana izy, dia miala ireny. 37Ary niely tamin'izany tany rehetra izany ny lazany.
38Nony nitsangana niala tao amin'ny sinagoga Jesoa, dia niditra tao an-tranon'i Simona. Sendra azon'ny tazo mahery ny rafozambavin'i Simona tamin'izay, ka niangavian'ny olona izy hahasitrana azy. 39Niondrika teo amin'ny marary izy nandidy ny tazo, dia niala ny tazo, ka nitsangana niaraka tamin'izay ravehivavy ary nampihinana azy ireo. 40Nony maty ny masoandro, izay nanana marary na inona na inona aretiny dia samy nitondra ny azy teo aminy, ka nametra-tànana tamin'izy ireo tsirairay avy izy, dia nahasitrana azy. 41Nisy demony nivoaka tamin'ny olona maro koa niantso hoe: Hianao no Zanak'Andriamanitra; fa norahonany tsy hiteny izy ireo noho izy nahalala azy ho Kristy.
42Raha vao naraina ny andro, dia lasa nankany amin'ny toerana mangingina anankiray izy. Vahoaka maro no nandeha nikaroka azy, ka nony tonga tao aminy dia nitady hihazona azy tsy hisaraka aminy intsony; 43fa hoy izy taminy: Tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa aho, fa izany no nanirahana ahy. 44Dia nitory teny tao amin'ny sinagogan'i Galilea manontolo izy. >